सूचना/प्रविधि Archives - Page2of 29 - Recent Nepal News
बुढेसकालमा कस्तो देखिन्छु भन्ने थाहा पाउने एप प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ ? डाटा सुरक्षाबारे विशेषज्ञको चिन्ता
श्रावण १, २०७६-आज बिहान एकाएक सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको टाइमलाईन भरी बुढेसकालमा कस्तो देखिन्छु भन्ने तस्वीरहरु आउन थाल्यो । फेसएप नामक एपमा तपाईले आफ्नो तस्वीर अपलोड गरेपछि तपाई बुढेसकालमा र युवा अवस्थामा कस्तो देखिनुहुन्छ भनेर सम्पादित तस्वीर सिर्जना गरिदिन्छ । विभिन्न रचनात्मक क्याप्सनले अपलोड गरेका तस्वीरहरुलाई थप रमाईलो बनाईदिएको छ भने यो एपको प्रयोगकर्ता बढीरहेका छन् । तर अन्त...
काठमाडौं- स्मार्ट फोन तथा सञ्चार उपकरण निर्माता हुवावेमाथि अमेरिकी सरकारका तर्फबाट व्यापारिक प्रतिबन्धपछि गुगलले पनि कम्पनीको एन्ड्रोइड लाइसेन्स आगामी केही महिनाबाट रद्द गरिसकेको छ । यस निर्णयपछि हुवावे आफ्ना स्मार्ट फोनमा एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम उपलब्ध गराउन नपाउने भएको छ । अमेरिकाको अर्थ मन्त्रालयले हुवावेलाई राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि खतरा रहेका कम्पनीहरुको सूचीमा सूचीकृत गरेपछि यो समस्या आएक...
हुवावेका फोनमा फेसबुक नचल्ने
काठमाडौं - अमेरिकी पार्टपुर्जा र सप्टवेयर खरिदमा प्रतिबन्ध झेलिरहेको चिनियाँ प्रविधि कम्पनी हुवावेमाथि अर्को धक्का लागेको छ । अमेरिकी कम्पनी फेसबुकको पनि हुवावेका नयाँ स्मार्टफोनमा आफ्ना एप्सको प्रि–इन्स्टलेसन नदिने जनाएको छ । हुवावे स्मार्टफोन किनिसकेका ग्राहकले भने फेसबुक एप्स प्रयोग र अपडेट गर्न पाउने फेसबुकले जनाएको छ । तर, अब बन्ने नयाँ हुवावे फोनमा फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ह्वाट्सएप हुने छै...
नयाँ स्मार्टफोनमा फेसबुक, ह्वाट्सएप र इन्स्टाग्राम एप नहुने,के हुन्छ पुरानो फोनमा ?
काठमाडौं - फेसबुकले आफ्ना एप ह्वावेईका स्मार्टफोनमा 'प्रि-इन्स्टल' अर्थात् फोन उत्पादन गर्दा नै राख्ने व्यवस्था अन्त्य गर्न लागेको समाचार संस्था रोएटर्सले जनाएको छ । त्यस्तो प्रतिबन्ध फेसबुकको मुख्य एपमा मात्र नभएर कम्पनीका भगिनीसंस्थाका रूपमा परिचित ह्वाट्सएप र इन्स्टाग्रामका एपमा पनि लागु हुनेछ। गत मे महिनामा अमेरिकाले आफ्ना देशका कम्पनीहरूलाई सुरक्षा जोखिम रहन सक्ने बताउँदै विदेशी दूरसञ्चार प्...
मोवाईलको अत्यधिक प्रयोग घातक: ‘२० वर्षपछि हरेक घरमा एउटा मानसिक रोगी हुने खुलासा ’
काठमाडौं - अहिले आधुनिक मोवाईल प्रविधिको जमाना छ । जो कोहीको हातमा मोवाईल फोन पुगेकै छ । त्यसमा अझ स्मार्ट फोनले बजार निकै तताएको छ । स्मार्ट फोनको जमानाले मानिसलाई निकै सहज तथा सरल बनाईदिएको छ । धेरै लामो समयमा बन्ने काम पनि सेकेण्ड भरमै सम्पन्न गराईदिन्छ । आजभोली मोवाईलको प्रयोग सूचना आदान प्रदान भन्दा अरु नै काममा बढी छ । स्मार्ट फोनले गर्दा यो सबै सहज बनाईदिएको हो । हामी मोवाईल भएपछि खाना खान...
नेट र गुलल नै नचल्ने भएपछि घटे हुवावेका ग्राहक, ‘सोध्छन् मात्रै किन्दैनन्’
काठमाडौं, जेठ १७- गुगलले विश्वकै सबैभन्दा दोस्रो ठूलो स्मार्टफोन निर्माण कम्पनी हुवावेको एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टमका अपडेट रोक्ने निर्णय गरेसँगै त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली बजारमा परेको छ । अमेरिकी नीतिसँगै नेपालमा हुवावे स्मार्टफोनको कारोबार निकै खस्किएको छ । बजारमा उपलब्ध हुवावेका सबै मोडेलको माग घटेपछि ग्राहकले अन्य विकल्प खोज्न थालेको व्यवसायी बताउँछन् । ‘हामी जवरजस्ती गर्न सक्दैनौं, ग्राहकल...
मंगल ग्रहमा आफ्नो नाम पठाउन चहानुहुन्छ ? यसरी लेखाउनुहोस् नाम
काठमाडौं,जेठ ८ – मंगल ग्रहमा आफ्नो नाम पठाउनेहरुको लागि अमेरिकामा रहेको अन्तरिक्ष अनुसन्धान केन्द्र नासाले अवसर ल्याएको छ । मंगल ग्रहमा मानव मिसन संचलन गर्न नासाले अमेरिकी सरकार, व्यापारी र अन्तर्राष्ट्रिय पार्टनरहरुको सामुहिक सहयोगको अपेक्षाको साथ थालेको मिसनमा यो अवसर जुटाउन लागेको हो । नासाले मार्स २०२० र अरु मिसनहरुबाट मंगल ग्रहमा मानिसहरु अन्वेषण गर्न प्रयास सुरु गरेको समेत जनाएको छ। आफ्नो न...
हुवावे : भविष्य खै !
एजेन्सी- गुगलले विश्वकै सबैभन्दा दोश्रो ठूलो स्मार्टफोन निर्माण कम्पनी हुवावेको एन्ड्रोइड अपरेटिंग सिस्टमका केही अपडेट रोक्ने निर्णय गरेको छ । यस कदमबाट चिनियाँ कम्पनी हुवावेलाई ठूलो धक्का पुग्ने भएको छ । नयाँ डिजाइनका हुवावे स्मार्ट फोनहरुले अब केहि गूगल एप्स सम्म पहुँच नपुग्ने भएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको सरकारले हालै बिना अनुमतिका कुनै पनि कम्पनीसंग अमेरिकाले व्यापार व्यवश...
काठमाडौं, जेठ २ - सरकारले डिजिटल नेपाल (स्मार्ट नेपाल) को अवधारणा अघि सारेको बेला सरकारी निकायका दुई सय वेबसाइट ह्याक (डिफेसेज) भएको सूचना प्रविधिका विज्ञहरुले बताएका छन् । विज्ञका अनुसार डिजिटल नेपाल हुनका लागि पूर्वाधार तयार भइसकेको छैन । बुधबार ‘सुबिसु कन्क्लेभ २०१९’ मा विज्ञहरुले नेपाललाई थप स्मार्ट बनाउन अझै केही समय लाग्ने दाबी गरे । कार्यक्रममा भैरव टेक्नोलोजीका सिइओ सरोज लामिछानेले ह...
फेसबुकको लाइभ स्ट्रिमिङमा कडाई, नयाँ ‘वन स्ट्राइक’ नीति लागू
एजेन्सी – चर्चित सामाजिक फेसबुकले आफ्नो लाइभ स्ट्रिमिङ फिचरलाई आजैदेखि कडाइ गर्ने भएको छ । लाइभलाई दुरुपयोग भएको भनि विश्वव्यापी रुपमा आलोचना भएपछि फेसबुकले आफ्नो लाइभ स्ट्रिमिङमा कडाई गर्न लागेको हो । फेसबुकले बुधबार एक वक्तव्य जारी गरी आफू नयाँ ‘वन स्ट्राइक’ नीतिमा गएको जनाएको हो । जस अन्तर्गतका फेसबुकको नियम अनुसार नचल्नेलाई अस्थायी रुपमा पहुँच अस्वीकार गरिनेछ । त्यो नीतिले कस्ता खालका गतिवि...
६० मुलुकमा पुग्यो कोरोनाको नयाँ भाइरस
काठमाडौं उपत्यकामा १४५ जना कोरोना संक्रमित थपिए
नेपालमा थप ३१८ जनामा कोरोना संक्रमण, ३८३ जना डिस्चार्ज